Psychology nezithandani - Bezzia | Bezzia
Abesifazane babheka ukubaluleka okukhulu ekubukekeni kwabo ngokomzimba, ngoba ngaphezu kokuba bephilile futhi beqinile ngokomqondo, bathanda ukubukeka bebahle. Kepha kwesinye isikhathi, zingaba khona izinkinga zangaphakathi ezenza umhlaba wonke womuntu uwe: izinkinga nabazali, nozakwethu, ngezifundo, ubunikazi noma ubuntu.
Ngakho-ke, sidale isigaba salezi zihloko, Psychology kanye Couple, ozozama ukusiza amantombazane ahlangabezana nalezi zinkinga, asenze sibone izinto mhlawumbe ebesingaziboni phambilini. Yize sikwenza kucace ukuthi asizona izazi zokusebenza kwengqondo nokuthi uma uhlushwa ukuphazamiseka okukhulu kufanele uye kulolu hlobo lochwepheshe, eBezzia sizokunikeza izeluleko ezizokusiza ukubhekana nalolu hlobo lwesimo.
Sizobheka lezi zinkinga ngombono oqondile: ukukhuluma ngokuthi singazwana kanjani nomndeni wethu noma ukuthi singabonisa kanjani ubuciko bokukhohlisa. Ngabe unentshisekelo?
Por UMaria Jose Roldan kwenza Amahora we-22 .
Impela lesi sisho sizwakala sijwayelekile kuwe: "Kungcono ukuba wedwa kunokuzihlanganisa nabantu ababi." Namuhla kunabantu abaningi ...
Ukukhathazeka nengcindezi, yini umehluko?
Ukukhathazeka nokucindezeleka kuyahambisana osukwini lwethu nosuku. Ngoba bobabili bakhona njalo futhi silalela ukukhuluma ...
Kuyini ukubopha ukuhlukumezeka?
Ubudlelwano kumele bususelwe ngaso sonke isikhathi, othandweni oluphakathi kwabantu bobabili nasekufuneni ...
Por UMaria Jose Roldan kwenza Izinsuku ze-7 .
Yize kungabonakala kungamanga, namuhla kusekuningi okumele kuthuthuke endaweni enempikiswano njengoba kunjalo ...
Iningi labantu livame ukuhlanganisa ukungathembeki nomkhakha wezocansi, noma kunjalo, ukujwayelana kungenzeka futhi ...
Awuqinisekile ukuthi ungakunciphisa kanjani ukukhathazeka? Vele akuyona into elula kakhulu ukuyenza kepha iyakwenza ...
Umbhangqwana kufanele uye nini ekwelashweni kwengqondo
Ukuthola umlingani ophelele kuyinto etholwa yilowo nalowo muntu omdala empilweni yakhe yonke. I…
Kunezinto ezimbalwa ezinhle kakhulu kule mpilo njengokwazi ukwaba uthando nomunye umuntu. Akukho muntu…
Kuyaye kuthiwe ebudlelwaneni obunempilo umuntu unikeza ngaphandle kokulindela ukubuyiselwa. Kodwa-ke, kunabantu aba ...
Ukuphelela akukho, noma ngabe sizama ukukuthola ngazo zonke izindlela. Kepha kukhona umuntu onamaphutha futhi lokhu kunga ...
Ukuphuka kwenhliziyo akuyona isidlo sokunambitheka okuhle kunoma ngubani futhi kucabanga ukwesaba okunonya umuntu ...
Amaphilisi okuvimbela inzalo
Lapho isifiso sobulili silahlekile ... yini okufanele uyenze?
Ngabe amaphilisi okulawula inzalo asusa isifiso socansi?